China abụọ akụrụngwa waterproof mkpuchi Manufacturers na Suppliers | Hongyuan
Abụọ-akụrụngwa waterproofing mkpuchi
Biogo TM abụọ-akụrụngwa waterproofing mkpuchi bụ iji mee waterproof ihe, na Group A na-isocyanate kwụsị tupu polima polycondensated site polyether na isocyanate, Group B na-agba mmiri mmiri esịnede plasticizer, na-agwọ gị n'ụlọnga, ndim mmadụ, coagulant gị n'ụlọnga na dịanyā,, Itoolu Group a na B evenly dị ka ọnụego na ahịhịa na waterproofing mkpụrụ n'elu ala, na-etolite a elastics na roba-dị ka mkpuchi film site cross-ojiji na solididying na nkịtị okpomọkụ, nke na-ekere òkè nke waterproofing
l Biogo TM abụọ-akụrụngwa waterproofing mkpuchi forms enweghị nkebi, iwekota ekwedo waterproof oyi akwa solidifying, ma melite waterproof na seeping eguzogide nke oru ngo, nke bụ waterproof akpụkpọ ahụ a na-apụghị imezu. Karịsịa mkpuchi film elu ekwedo na elongation, elu ime mgbanwe iji kwekọọ mkpụrụ craking ma ọ bụ mgbasa.
l Firm bonding na mkpụrụ, mkpuchi film nwere oké bonding ike na ihe, osisi, metal, ite na Asbestos shingle, nwekwara ike-eji dị ka nkekọ.
l adaba ngwa, polyurethane mkpuchi film bụ a oyi ngwa waterproof mkpuchi, dị nnọọ mix otu A na B ka ọnụego mgbe ngwa na ahịhịa ya na waterproof mkpụrụ.
l Easy mmezi, naanị ịnọgide na-enwe agbajikwa akụkụ, nke nwere ike iru mbụ mmetụta nke waterproofing, ịzọpụta oge, azọpụta ike na ala na-eri.
l Environmental ngwaahịa, ma belata mmebi nke onye na gburugburu ebe obibi.
Ọtụtụ-eji n'elu ụlọ, n'okpuru ala, igwu mmiri, na ụdị nile nke ụlọ ọrụ na obodo ụlọ waterproofing.
Nka na ụzụ onwunwe [Igbu ọkọlọtọ GB / T19250-2003]
Akọrọ oge nke n'èzí / n'ime h≤
Ihicha oge nke n'èzí
Ihicha oge nke n'ime
Ike ọdụdọ MPa≥
Mgbaji ọkpụkpụ elongation% ≥
Ekwe na ala okpomọkụ ℃ ≤
Hụ ike nke ooh isi a MPa≥
a. eji naanị ooh mkpụrụ nke ala oru ngo.
l mkpụrụ mkpa ike, ezigbo, dịghị sundries, n'ime akuku na n'èzí n'akụkụ ga ike n'ime okirikiri aak, na dayameta nke Ọnọnime nkuku kwesịrị karịa 50mm, na n'èzí corder
l kwesịrị ịbụ ihe karịa 10mm .;
Mgwa na onunu ogwu: dị ka ngwa onunu ogwu, evenly agwakọta gburugburu o anyị.
l Reference onunu ogwu; mkpuchi film onunu ogwu bụ banyere 1.3-1.5kg / sqm mgbe ọkpụrụkpụ bụ 1mm.
Large waterproof ngwa, mkpuchi Ime Otu mbuaha mkpuchi na a roba ma ọ bụ plastic akpụcha, na ọkpụrụkpụ bụ onsistent, n'ozuzu ya bụ 1.5mm na 2.0mm, a ga-leghaara na 3 4 ugboro, na oge ikpeazụ brushing ga-eme mgbe aga na nkeji eleghara ọrịa na-aghọ film, na brushing na a ertical direction. N'ozuzu ka a iche iche film na-akpụ, n'ihi na ala oru ngo osisi, ga-kpuchie a oyi akwa nke obi mesikwuru ihe onwunwe na mgbakwunye
Mkpuchi ọkpụrụkpụ: Iji ala oru ngo ọkpụrụkpụ bụ 1.2 na 2.0mm, n'ozuzu 1.5mm; ka ụlọ mposi ọkpụrụkpụ bụ ihe na-erughị 1.5mm; na multilayer waterproof nke exposured ụlọ ewu ọkpụrụkpụ bụ ihe na-erughị 1.2 ,,; otu oyi akwa waterproof nke ọkwa Ⅲ waterproof, ọkpụrụkpụ bụ ihe na-erughị 2mm;
Finishing oyi akwa ngwa: achụsasịkwa ndị kpochara ájá tupu oge ikpeazụ brushing na-adịghị sikwuo ike.
l Diluent nwere ike ịbụ na-aba n'anya acid, Nitro diluent dị ka agba thinner, adịghị emetụ na mmiri.
l Nọgidenụ ventilet kenyere, knife ọkụ.
l Ọ bụrụ na ihe nwere nta na àgwà, ọ ga-evenly weere tupu ojiji
l The ewu na saịtị ga-ezi ventilashion na-ekwesịghị itinye na ezo ụbọchị;
l Mepee mkpuchi mgbe were, ọ ga-eji ruo na 40 nkeji;
l Ọ bụrụ chọta gbajiri mkpuchi film na-ewu ihe owuwu, igwu gburugburu gbajiri oghere na ịcha mma, na mgbe ahụ na abọ waterproofing mkpuchi na idozi
Nchekwa na anya ihe
l Buru ihe n'ime ụlọ nke bụ akọrọ na ventilet kenyere
l Zere kpọmkwem ìhè anyanwụ mgbe njem, zere collisions na ntị ka ọkụ
l The nkwa oge nke nchekwa bụ ọnwa isii, mkpuchi nke nchekwa oge ga-eji mgbe rechecking
Osote: NRC rubbering mkpuchi
Water Base Polyurethane Waterproof mkpuchi , Tpo Waterproof akpụkpọ, Acryli Waterproof mkpuchi, Mgbanwe Polymer-Cement Waterproof mkpuchi , Polyurethane mkpuchi N'ihi Concrete , Single-Ply roofing akpụkpọ ahụ ,
Water Base Polyurethane Waterproof mkpuchi , Tpo Waterproof akpụkpọ, Acryli Waterproof mkpuchi, Mgbanwe Polymer-Cement Waterproof mkpuchi , Single-Ply roofing akpụkpọ ahụ , Polyurethane mkpuchi N'ihi Concrete ,